(၁)နှစ်ကနေ (၆)နှစ်အတွင်း သားသားမီးမီးတွေကို သွန်သင်ထိန်းကျောင်းဖို့ နည်းလမ်းကောင်း (၅) သွယ် - For her Myanmar
ယောင်းတို့ရေ … သားသားမီးမီးတွေကို လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်လာအောင် ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရတာလဲ လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ချေဘူး။ သွန်သင်ဆုံးမနည်းမှားရင်လည်း ကိုယ်ပဲရင်ကျိုးရဦးမယ်။ ဒါ့အပြင် အခုခေတ်သွင်သင်ဆုံးမနည်းတွေက တို့ ငယ်ငယ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရသလို မဟုတ်တော့ဘဲ ပိုထိရောက်တဲ့ နည်းစနစ်အသစ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ ခေတ်နဲ့အညီ သားသမီးကို ဆုံးမသွန်သင်နိုင်အောင် ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကို ဖတ်ကြည့်နော်။
(၁) စည်းကမ်းထားတဲ့နေရာမှာ ကလေးကိုပါ ကူညီခိုင်းပါ
အိမ်မှာ စည်းကမ်းချက်တွေသတ်မှတ်တဲ့အခါ မိဘတွေကပဲ သတ်မှတ်လိုက်တာများပါတယ်။ ဒီလိုမလုပ်ဘဲ ယောင်းရဲ့ သားသားမီးမီးကိုပါ ကူညီစည်းကမ်းချမှတ်ခိုင်းကြည့်ပါ။ ဥပမာ “ကစားစရာတွေကို သားသားဆော့ပြီး ပြန်မသိမ်းမိရင် မေမေပန်းကန်ဆေးတဲ့အခါ ဝိုင်းကူရမယ်။ သားသားသဘောတူလား ?” လို့ မေးတာမျိုးပေါ့။ လေ့လာချက်တွေအရဆို စည်းကမ်းချမှတ်တတ်ပြီး စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ရလဒ်တွေကို နားလည်တဲ့ ကလေးတွေက လူတော်ဖြစ်လာဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်တဲ့။
စနေ၊တနင်္ဂနွေရုံးပိတ်ရက်တစ်ရက်လောက်ရွေးပြီး ဘာစည်းကမ်းမှ မရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့အဖြစ်ထားပါ။ အဲ့လိုနေ့မျိုးမှာ သူတို့စားချင်တဲ့ အစားအစာတွေ၊ သူတို့ဆော့ချင်တဲ့ ကစားနည်းတွေ (ယောင်းပါဝင်ဆော့ရမှာနော်)၊ သူတို့ဘယ်အချိန် အိပ်ရာဝင်မယ်ဆိုတာတွေကို သူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးခိုင်းလိုက်ပါ။ သူတို့စားချင်တာတွေက အချိုတွေချည်းပဲဖြစ်နေရင်၊ ညဘက်လုံးဝအိပ်ရာဝင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှပေါ့။
Related article >>> ကလေးငယ် သွားပေါက်ရမယ့် အချိန်မှာ သွားမပေါက်လို့ စိတ်ညစ်နေလား?
ငယ်ငယ်ကဆော့တဲ့ မိုနိုပိုလီ၊ မြွေလှေကားစတဲ့ အန်စာတုံးနဲ့ဆော့ရတဲ့ ဂိမ်းတွေမှတ်မိတယ် ဟုတ် ? ယောင်းရဲ့ကလေးတွေနဲ့ ဒီကစားနည်းတွေကို ကစားပေးပါ။ ဒီလိုနေ့တွေမှာဆိုရင် ယောင်းရဲ့ခင်ပွန်းကိုပါ ဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်များများ ကလေးတွေအတွက် အချိန်ပေးရမယ်လို့သာ ချုပ်ထားလိုက်။ ဒီလိုဂိမ်းတွေကို မိသားစုနဲ့ အတူတူ ကလေးတွေရဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတင် မဟုတ်ဘဲ မေတ္တာထားတတ်တဲ့စိတ်လေးကိုပါ ပိုပြီး အားကောင်းစေပါတယ်။
(၄) တောက်တိုမယ်ရလေးတွေ ခိုင်းပေးပါ။
လူကြီးတွေက ကလေးတွေကို အိမ်အလုပ်ပေးလုပ်မိရင် တစ်အိမ်လုံးဗြောင်းဆန်သွားမယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဗြောင်းဆန်ပါစေ။ သူတို့အရွယ်နဲ့ ကိုက်တဲ့ အိမ်မှုကိစ္စသေးသေးလေးတွေ ခိုင်းပြီး အကျင့်လုပ်ပေးမှသာ သူတို့အနေနဲ့ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယူတတ်တဲ့အကျင့်လေးရှိလာမှာပါ။
(၅) အမှားရှိရင် တောင်းပန်ပါ။
ဒီအရွယ်တွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ သင်ယူနေတဲ့အရွယ်ပါ။ ဒီအချိန်မှာ မိဘတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်က ကလေးရဲ့စံပြဖြစ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ များသောအားဖြင့် မိဘတွေက ကိုယ်အမှားလုပ်မိရင်တောင် ငါလူကြီးပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ဝန်မခံတတ်ကြပါဘူး။ ဒါက ကလေးကို ဘာလုပ်လုပ်တောင်းပန်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ အတုယူမှားစေပါတယ်။ ကလေးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အမှားလုပ်ရင် တောင်းပန်ရကောင်းမှန်း အသိဝင်သွားဖို့ဆိုရင်တော့ ယောင်းအနေနဲ့ အမှားလုပ်မိရင် ချက်ချင်းတောင်းပန်သင့်ပါတယ်။
Related article >>> ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများကို သွန်သင်ဆုံးမလိုတဲ့မိဘများအတွက် အကြံပြုချက်
ကဲ…ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းတို့လည်း သားသားမီးမီးတွေကို ဘယ်လိုထိန်းကျောင်းရမလဲဆိုတဲ့ ခေတ်မီနည်းလမ်းကောင်းတွေကို သိကြလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကိုသုံးပြီး ယောင်းရဲ့ရင်နှစ်သည်းချာလေးတွေကို နောက်မျိုးဆက်ရဲ့ ခ်ေင်းဆောင်ကောင်းလေးတွေ ဖြစ်လာအောင် ပျိုးထောင်ကြစို့နော်။
ယောငျးတို့ရေ … သားသားမီးမီးတှကေို လူတဈလုံးသူတဈလုံးဖွဈလာအောငျ ကြှေးမှေးစောငျ့ရှောကျရတာလဲ လှယျတဲ့ကိစ်စတော့ မဟုတျခဘြေူး။ သှနျသငျဆုံးမနညျးမှားရငျလညျး ကိုယျပဲရငျကြိုးရဦးမယျ။ ဒါ့အပွငျ အခုခတျေသှငျသငျဆုံးမနညျးတှကေ တို့ ငယျငယျက ကွုံတှခေဲ့ရသလို မဟုတျတော့ဘဲ ပိုထိရောကျတဲ့ နညျးစနဈအသဈတှဖွေဈလာပွီဆိုတော့ ခတျေနဲ့အညီ သားသမီးကို ဆုံးမသှနျသငျနိုငျအောငျ ဒီနညျးလမျးလေးတှကေို ဖတျကွညျ့နျော။
(၁) စညျးကမျးထားတဲ့နရောမှာ ကလေးကိုပါ ကူညီခိုငျးပါ
အိမျမှာ စညျးကမျးခကျြတှသေတျမှတျတဲ့အခါ မိဘတှကေပဲ သတျမှတျလိုကျတာမြားပါတယျ။ ဒီလိုမလုပျဘဲ ယောငျးရဲ့ သားသားမီးမီးကိုပါ ကူညီစညျးကမျးခမြှတျခိုငျးကွညျ့ပါ။ ဥပမာ “ကစားစရာတှကေို သားသားဆော့ပွီး ပွနျမသိမျးမိရငျ မမေပေနျးကနျဆေးတဲ့အခါ ဝိုငျးကူရမယျ။ သားသားသဘောတူလား ?” လို့ မေးတာမြိုးပေါ့။ လလေ့ာခကျြတှအေရဆို စညျးကမျးခမြှတျတတျပွီး စညျးကမျးဖောကျဖကျြခွငျးရဲ့နောကျဆကျတှဲ ရလဒျတှကေို နားလညျတဲ့ ကလေးတှကေ လူတျောဖွဈလာဖို့ ရာခိုငျနှုနျးမြားပါတယျတဲ့။
စနေ၊တနင်ျဂနှရေုံးပိတျရကျတဈရကျလောကျရှေးပွီး ဘာစညျးကမျးမှ မရှိတဲ့နတေ့ဈနအေ့ဖွဈထားပါ။ အဲ့လိုနမြေို့းမှာ သူတို့စားခငျြတဲ့ အစားအစာတှေ၊ သူတို့ဆော့ခငျြတဲ့ ကစားနညျးတှေ (ယောငျးပါဝငျဆော့ရမှာနျော)၊ သူတို့ဘယျအခြိနျ အိပျရာဝငျမယျဆိုတာတှကေို သူတို့စိတျကွိုကျရှေးခိုငျးလိုကျပါ။ သူတို့စားခငျြတာတှကေ အခြိုတှခေညျြးပဲဖွဈနရေငျ၊ ညဘကျလုံးဝအိပျရာဝငျမှာ မဟုတျဘူးဆိုရငျတောငျမှပေါ့။
Related article >>> ကလေးငယျ သှားပေါကျရမယျ့ အခြိနျမှာ သှားမပေါကျလို့ စိတျညဈနလေား?
ငယျငယျကဆော့တဲ့ မိုနိုပိုလီ၊ မွှလှေကေားစတဲ့ အနျစာတုံးနဲ့ဆော့ရတဲ့ ဂိမျးတှမှေတျမိတယျ ဟုတျ ? ယောငျးရဲ့ကလေးတှနေဲ့ ဒီကစားနညျးတှကေို ကစားပေးပါ။ ဒီလိုနတှေ့မှောဆိုရငျ ယောငျးရဲ့ခငျပှနျးကိုပါ ဘယျလောကျအလုပျလုပျမြားမြား ကလေးတှအေတှကျ အခြိနျပေးရမယျလို့သာ ခြုပျထားလိုကျ။ ဒီလိုဂိမျးတှကေို မိသားစုနဲ့ အတူတူ ကလေးတှရေဲ့ ဉာဏျရညျဉာဏျသှေးတငျ မဟုတျဘဲ မတ်ေတာထားတတျတဲ့စိတျလေးကိုပါ ပိုပွီး အားကောငျးစပေါတယျ။
(၄) တောကျတိုမယျရလေးတှေ ခိုငျးပေးပါ။
လူကွီးတှကေ ကလေးတှကေို အိမျအလုပျပေးလုပျမိရငျ တဈအိမျလုံးဗွောငျးဆနျသှားမယျလို့ ထငျတတျကွပါတယျ။ ဗွောငျးဆနျပါစေ။ သူတို့အရှယျနဲ့ ကိုကျတဲ့ အိမျမှုကိစ်စသေးသေးလေးတှေ ခိုငျးပွီး အကငျြ့လုပျပေးမှသာ သူတို့အနနေဲ့ ကိုယျ့တာဝနျကိုယူတတျတဲ့အကငျြ့လေးရှိလာမှာပါ။
(၅) အမှားရှိရငျ တောငျးပနျပါ။
ဒီအရှယျတှကေ ပတျဝနျးကငျြကနေ သငျယူနတေဲ့အရှယျပါ။ ဒီအခြိနျမှာ မိဘတဈယောကျဖွဈတဲ့ ကိုယျက ကလေးရဲ့စံပွဖွဈနဖေို့ လိုပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ မိဘတှကေ ကိုယျအမှားလုပျမိရငျတောငျ ငါလူကွီးပဲဆိုတဲ့စိတျနဲ့ ဝနျမခံတတျကွပါဘူး။ ဒါက ကလေးကို ဘာလုပျလုပျတောငျးပနျစရာမဟုတျဘူးလို့ အတုယူမှားစပေါတယျ။ ကလေးရဲ့ စိတျထဲမှာ အမှားလုပျရငျ တောငျးပနျရကောငျးမှနျး အသိဝငျသှားဖို့ဆိုရငျတော့ ယောငျးအနနေဲ့ အမှားလုပျမိရငျ ခကျြခငျြးတောငျးပနျသငျ့ပါတယျ။
Related article >>> ဆယျကြျောသကျကလေးမြားကို သှနျသငျဆုံးမလိုတဲ့မိဘမြားအတှကျ အကွံပွုခကျြ
ကဲ…ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးတို့လညျး သားသားမီးမီးတှကေို ဘယျလိုထိနျးကြောငျးရမလဲဆိုတဲ့ ခတျေမီနညျးလမျးကောငျးတှကေို သိကွလောကျပွီထငျပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးကောငျးလေးတှကေိုသုံးပွီး ယောငျးရဲ့ရငျနှဈသညျးခြာလေးတှကေို နောကျမြိုးဆကျရဲ့ ချေငျးဆောငျကောငျးလေးတှေ ဖွဈလာအောငျ ပြိုးထောငျကွစို့နျော။
Tags: children, Family, home, lifestyle, mom, parenting, Relationship